Amaphupho mayelana namaBhange nokuthi asho ukuthini – iAfrika
Amaphupho mayelana namaBhange
Ukuphupha ngebhange kumela amasu noma amandla owaqukethe ongawasebenzisa noma yinini. Amathalente, amakhono, ukusekelwa ngokwezimali, ukusekelwa ngokomzwelo, noma izinto ezikunikeza umuzwa wokulondeka.
Yilokhu oyamela kukho ukuzigcina ulondekile noma uphumelela.
Ibhange lingakhombisa futhi ukuthi ubudlelwane bakho nabanye noma ukusebenzisana kwakho nabantu kunamandla kangakanani futhi kulunge kangakanani. Amandla, amasu noma abantu obasebenzisayo ukufeza izinjongo zakho. Ukuphatha abantu ngokuphelele okunesibopho noma okwesidala.
Okubi ukuthi ukuphupha ngebhange kungakhombisa imizwa yokuthembela entweni noma emntwini ukuze wenze into. Ukuzizwa uyisilima ngoba umuntu ukwazi ukuphatha impilo yakho yonke noma abambezele impilo yakho yonke ngenxa yento eyodwa. Imizwa ngokuvinjelwa ukuthi ukwazi ukuba namandla. Ukuzwa sengathi abantu abangahlakaniphile noma abaqhoshayo noma abaphathayo bakwazi ukukwenzela izinqumo. Ukuzizwa ngawe noma ngabanye abantu abadinga ukuphatha abanya ngokuphelele.
Ukuphupha ngokurobha ibhange kumela amasu noma amandla owasebenzisa noma ungawasebenzelanga. Kungasho ukufeza izinjongo ngendlela embi, enobugovu noma engenaqiniso.
Ukuhambisa imali phakathi kwamabhange kumela ukushintshana kwamandla noma amasu phakathi kkubalulekile okuyisisekelo. Kungenzeka ukuthi usuba nokuzizwa ungcono ngezinye izindlela noma uzizwa ungengcono ngezinye izindlela. Kungasho noshintsho kwendlela yokucabanga ngendlela yakho yokufeza izinjongo noma yokugcina amandla.